admin – FunnyPC
Zawgyi သဘောကောင်းတဲ့ ကိုကို သူငယ်ချင်း တယောက်နဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်နေတုန်း ဖုန်းမြည် လာတယ် “တီ… တီ..” “ဟလို” “ကိုကိုလား… ချစ်လေးပါ” “အင်း…” “ချစ်လေး ခု ပွဲစားတန်း ရောက်ပြီး ကိုမော်ကြီးတို့နဲ့ တွေ့နေတာ” “အင်း…” “အဲဒါလေ ချစ်လေး ခုစီးနေတဲ့ ကားကို ကာဒီနာ နဲ့ လဲမလားတဲ့၊ အလိုက် …
မူး မမူး စမ်းသပ်​နည်း
Zawgyi မူး မမူး စမ်းသပ်​နည်း ကားတစ်စီးကို ယဉ်ထိန်းရဲ ဖြစ်သူက တား လိုက်ပြီး ယာဉ်မောင်း ဖြစ်သူကို ပြောလိုက် သည်။ “ခင်ဗျား မူးပြီး ကားမောင်း နေပါလား” “ကျွန်တော် မမူး ပါဘူး ဗျ” “ဒါဆို ဒီ ရော်ဘာ ဘောလုံး ကို မှုတ်ပြ စမ်းပါ” ယာဉ်မောင်း ဖြစ်သူက …
Zawgyi ဈေးတက်သွားပြီ တခါတုန်းက လူမြင်​ရင်​ သနား ကြင်​နာ တတ်​တဲ့ လူကြီး တ​ယောက်​ ရှိသတဲ့ သူက မနက်​ မိုးလင်းတိုင်း ကျန်းမာ​ရေး အနေနဲ့ လမ်း​လျှောက်​ ထွက်​တာ​ပေါ့ တ​နေ့​တော့ သူ​ လမ်း​လျှောက်​ နေတဲ့ လမ်း ဘေးက အ​ကြော်​​ ရောင်း​နေတဲ့ မိန်းမကြီး တ​ယောက်​ကို မြင်​​တော့ သနားသွားတယ်​.. ဒါနဲ့ …
Zawgyi ကာဒစ် ” ​ဟျောင့်​ သယ်​ရင်း… မင်းမိန်းမ ရန်​ကုန်​သူ​ ခေါ်လာတယ် ​ဆို” ” ​အေး မင်းတို့ နှစ်​​ကောင်​ ဘယ်က လှည့်​လာတုန်း မိန်းမက ​နောက်​မှာ ချက်​ပြုတ်​​နေ တယ်​ကွ… မန်း​လေးကို လိုက်​ပြ​စေ ဆိုလို့ ​ခေါ်လာတာ..” ” ကို​ရေ… ဧည့်​သည်​​တေ​ ရောက်​​နေ တာလား.. ဧည့်​သည်​တို့ ​ကော်​ဖီ …
funny / Knowledge
Zawgyi သေမင်းလက်မှ ထွက်ပြေးခြင်း သေမင်း ။ ။ ဟဲ့ … လူသား မင်း ဒီနေ့ သေနေ့ စေ့ပြီ လူသား ။ ။ ဗျာ… ခင်ဗျားက သေမင်း လား….? သေမင်း ။ ။ အေး.. ဟုတ်တယ် ကွ လူသား ။ ။ ဗျာ…. …
Zawgyi စိတ္တဇ ​ကောင်​​လေး တက္ကသိုလ် ကျောင်းတက် နေသော်လည်း ငယ်စဉ် ကတည်းက ကျောင်းသွား ကျောင်းပြန် တက်ခဲ့ ကြတဲ့ အရမ်း ချစ်ကြတဲ့ ကောင်​​လေးနဲ့ ​ကောင်​မ​လေး နှစ်​ယောက် ရှိတယ်​။ အရွယ် ရောက် လာတော့ ဟိုစိတ် ဒီ စိတ်တွေ ပေါက်ဖွား ခဲ့ပြီး ချစ်သူ အဆင့်ကို ရောက်ရှိ သွားခဲ့ …
Zawgyi ရှုပ်​လိုက်​တဲ့မိသားစု မူး​နောက်​​နေတာပဲ မုဆိုးမ တစ်ယောက်ကို ကျနော် လက်ထပ် လိုက်တယ်။ အဲဒီ မုဆိုးမ မှာ ချောမော တဲ့ သမီးလေး ရှိတယ်။ အဲဒီ သမီးကို ကျနော့် အဖေ က မျက်စိ ကျပီး တရားဝင် လက်ထပ် လိုက်တယ်။ဒီနည်းနဲ့ ကျနော့် အဖေ ဟာ ကျနော့် သားမက် …
Zawgyi ဝဋ်ကြွေးတွေ မြန်မြန်ကျေအောင် တခါတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ … လင်မယား နှစ်ယောက်ရှိပါတယ် … အမျိုးသားဟာ သိပ်ကိုကြမ်းတမ်းတဲ့ စရုိုက်ရှိတဲ့ အတွက်တစ်နေ့ တစ်နေ့ သူ့အမျိုးသမီးကို အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာပြီး ရုိုက်နှက်တတ်ပါတယ် ။ သူအလုပ်က ပြန်လာပြီဆုိုတာနဲ့ မျက်နှာက တည်တင်းလို့ အမျိုးသမီးကို ဘယ်လုို အပြစ်ရှာရမလဲ ဆိုတာပဲတွေးနေတတ်ပါတယ် … အပြစ်ကလေး တစ်စုံတစ်ရာ …
Zawgyi အု တွေကွဲကုန်မယ် လူကျပ် နေသော ဘတ်စ်ကား ပေါ်သို့ လှတပတ အမျိုးသမီး တဦး လက်ဆွဲအိတ် ၂ လုံး မနိုင် တနိုင် မကာ တက် လာသည် … ကားပေါ်မှ မတ်တပ် ရပ်နေသူ ပု၇ိသ ကိုကို အများလည်း ထိုမိန်းကလေး စီသို့ မျက်လုံးများ ရောက် သွားကြ၏… …
င်္For Zawgyi ရိုးရိုးသားသား တောင်းပန်ပါတယ် ဖုန်း မက်ဆေ့ ဝင်လာလို့ Mr. Smith ကြည့်လိုက်တော့ ဘေးအိမ်ကသူ ပို့လိုက်တာ ဖြစ်နေတယ် ။ “ ခင်ဗျား မိန်းမ (wife) ကို နေ့ရော ၊ ညရော ကျွန်တော် သုံးနေတယ် ။ ခင်ဗျား အိမ်မှာ မရှိတဲ့ အချိန်တွေဆို ခင်ဗျား …